Saripika : Hampiranty ny « Sarisahy » ilay teratany libaney Toni Haddad
Tantara an-tsary hitambaran’ny sary fanadihadiana sy ny sary zavakanto. Ampirantiana etsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo ny saripika, sangan’asan’ilay teratany libaney Toni Haddad ary nampitondraina ny lohateny hoe « sarisahy ». Asehon’io fampirantiana io ireo sary maneho ny …Tohiny
Tantara an-tsary : Navelan’i Richard Rabesandratana ho kamboty i Benandro
Iray amin’ireo mpanao tantara an-tsary nanamarika ny tantaran’io zavakanto io tany amin’ny taona 80. Navelan’i Richard Rabesandratana ho kamboty tanteraka i Benandro. Nodimandry ny alahady lasa teo ary nalevina omaly tetsy Anjanahary Richard Rabesandratana, ilay …Tohiny
Praiminisitra Mahafaly Olivier : “Ho hita ao anatin’ny telo volana ny ezaky ny governemanta”
Hentitra. Nanome baiko ny governemanta ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier nandritra ny lahateniny tamin’ny fitokanana fotodrafitrasa teny amin’ny Kaominina Ivato, omaly. Araka izany, nanambara ny tenany fa “tokony ho hita taratra ao anatin’ny telo volana …Tohiny
Fanatsarana ny fampidiran-ketra : Tokony hiditra amin’ny fampiasana teknolojia vaovao
Mbola anisan’ny vato misakana eo amin’ny tsy fidiran’ny tahan-ketra ara-dalàna ny tsy fahafehezana ny Teknolojia Vaovao Momba ny Ita sy ny Serasera (TVMIS). Fantatra tokoa mantsy fa ny ankamaroan’ireo firenena mandroso izay manana tahan-ketra ambony …Tohiny